Adeega Caafimaadka – Hanoolaato Somalia National Party
Adeega caafimaadka Soomaaliya oo dhan ayaan rabnaa in aan kor uqaadno oo aan gaarsiino heerka ugu sareeya oo caafimaad uu qof binu aadam ahi heli karo. Insha Allah.
Waxaan dhisi doonaa isbitaalo magaalooyinka waaweyn oo dhan. Waxaan dhisi doonaa hay’ad caafimaad oo dalkoo dhan isku xirta iskuna xiran soona aruurisa datada oo dhan oo markaasna lawadaagta dowlada iyo hay’adaha kale oo information kaas ay wax utari karto markii laga reebo informationka aqoonsiga shaqsiga. Waxay kaloo hay’adaas ka mas’uul noqon doontaa diwaan galinta adeeg bixiyeyaasha caafimaadka sida dhaqaadiirta, nurseska iyo xarumaha dadka lagu daaweeyo oo dhan. Mar dambe dhici meyso in ay Soomaaliya xogta dalkeeda iyo dadkeeda uraadiso hay’ado caalami ah iyo dad ajaanib ah. Waajib ayay kunoqonaysaa adeeg bixiye kasta in uu aruuriyo, organise gareeyo lana wadaago intii rabta wax walba oo ay qabtaan iyo wixii kasoo baxa.
Wuxuu dalkeenu yaalan doonaa adeeg caafimaad oo casri ah kaafiyana umadda Soomaaliyeed. Wuxuu ukala qeybsanaan doonaa adeeg ay bixiso dowlada, mid uu bixiyo shaqsi private ah iyo kuwo ay bixiyaan shirkado intaas oodhan oo kuligood si rasmi ah u diwaan gashan una gutta shaqadooda si waafaqsan sharciga dalka iyo wixii xeer iyo habraac ah oo dhan. Hanoolaato waxay aaminsan tahay sareeynta sharciga anaagana horseedayna oo tusaale unoqonayna oo aan marnaba dhinac uga leexan doonin sharciga. Sidaas oo kale wixii sharciga ku xadgudba aqoon kasta, awood kasta iyo dhaqaale kastaba halahaadee waa in ay ogaadaan in aan marnaba sharciga la baal mari doonin.
Riyadau Way Rumoobin
Adigoo dalkaaga hooyo jooga xaquuqdaada iyo xoriyadaada haysta, dhaqaale fiican oo noloshaada kaafiya si xalaal ah kugusoo gasho, adeega caafimaadka ugu fiican labo tilaabo uu kuu jiro ehelkaaga iyo inta aan aduunka ugu jeceshahayna kaa agdhowyihiin hadii aad Allahaaga kuxamdisid si aad aakhirana midaan mid kafiican uheshid kawaran. Anigu waa nolosha aan rabo hadii rabbi raali kanoqdo aamiin. Adigu haday taada tan kaduwan tahay oysan sharcigana kahor imaanaynin waad heli kartaa adigoo dalkaaga hooyo joooga waan helaysaa insha Allah.
Dadaal Allah wuu ku caawin.
… Gucci si aad udaawatid …
Email kaaga qor
si aad noola Socotid